Wzọ atọ ịgba chaa chaa - pisklak.net
Wzọ atọ ịgba chaa chaa
Ugboro ole ka ị na-agba chaa chaa ma nweta self love karịa ka ị malitere? Ọ bụrụ na ị na-adị ka ọtụtụ ndị na-agba chaa chaa, azịza un na-abụkarị. Mana ị ga – agbaso usoro ole na ole iji gbanwee akara aka gị.
Ihe ị ga – eme bụ ịmụ ihe kpatara ị furu efu ma chọpụta ihe ndị ịgba chaa chaa na – emeri na – eme nke ị na – emeghị. Ọ bụ ya only m ji tinye edemede a ọnụ.
Ndị that a bụ ụzọ atọ ị ga-esi kwụsị ida mgbe ị na-agba chaa chaa. Onweghi ihe ị ga – ga ewepụ iwepu 100 percent nke oge ahụ, mana ị nwere ike ịkwụsị ida ọtụtụ oge nke pụtara na ị ga – emeri karịa.
1 – Kpachara anya banyere egwuregwu ndị ị na-egwu.
Egwuregwu ndị ị na-egwu mgbe ị na-agba chaa chaa na-adabere na self ole ị ga-efunahụ. Egwuregwu ahụ abụghị naanị mgbanwe metụtara etu ị tufuru. Mana egwuregwu ndị a na-arụ nnukwu ọrụ.
Eziokwu bụ na ụfọdụ ihe omume ịgba chaa chaa na-eme ka ị ghara ịfu karịa ndị ọzọ na ego ole ị tufuru na-adaberen’otú ụlọ ịgba chaa chaa ma ọ bụ obere ụlọ ịgba chaa chaa dị.
Ọ bụrụ na ịmara otu esi eji usoro ziri ezi, enwerekwa ụfọdụ ọrụ ịgba chaa chaa na-enye gị ohere iji merie. Ga-amụtakwu banyere ọrụ ndị a t ngalaba 3 ikpeazụ nke edemede a.
N’aka nke ọzọ, nke a pụtara t e hiwere ụfọdụ ọrụ ịgba chaa chaa ka ị ghara inwe mmeri. Ee, ị nwere ike imeri buck ole na olen’oge ọ bụla, mana ị ga-atụfu ya. Nke a bụ ihe kpatara ị ga-eji kpachara anya banyere egwuregwu ịgba chaa chaa ị na-egwu.
two – Jiri self service gi
Nke a nwere ike ịdị ka ọ dị ịtụnanya, mana ịkwesịrị iji bankroll gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịlafu obere mgbe ị na-agba chaa chaa. Rollkwụ ụgwọ gị agaghị eme gị mmeri. Ma inwere ike iji un nyere gị aka ida obere na / ma ọ bụ merie karịa.
Nke a pụtara na ihe kachasị mkpa bụ ịnweta ụlọ akụ. Nke a bụ ndozi dị mfe ma ọ bụrụ na ịnweghị bankroll. Naanị ịmalite bankroll ugbu a Gclub You nwere ike ịmalite t self ọ bụla maka ịgba chaa chaan’agbanyeghị self ma ọ bụ obere self love ị nwere. Younwere ike ịgbakwunye ya t chunk gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ.
Wayzọ kachasị mkpa iji jiri bankroll kwụsị nnukwu ọghọm bụ iji nha nke bankroll gị iji chọpụta ókè ị dị njikere itinyen’ihe egwun’otu ma ọ bụ nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ihe karịrị 10 percent nke self service akaụntụ gị na njem ịgba chaa chaa ọ bụla, ị na-echekwa bankroll gị ma belata ihe ọghọm ọ bụla.
Ozugbo ị mụtara otu ị ga-esi merie, ị nwere ike iji uru gị tinye ego na akaụntụ gị. Ka ọ dị ugbu a, ịnwere ike itinye ego na akaụntụ akụ gị mgbe ị nwetara ya ma ọ bụ wepụta self loven’ụzọ ọzọ.
3 – Nwee atụmanya ndị ezi uche dị na ha
Ikwesiri ighota otu esi emeri d e itufu oru mgbe igwu cha cha. Ruo mgbe ị ghọtara ihe mere ị ji efunahụ, ị ​​gaghị atụ anya ihe ga-esi na ya pụta.
Na nke mbụ, ekwuola m ịgba chaa chaa na-aba uru oge niile.Mgbe gị d e ndị na-asọ mpi na-agba chaa chaa, ị ga-efufu oge na ogologo oge.
Ọ pụtakwara na ọ bụrụ na ị na-agba chaa chaa na igwe oghere a, ị gaghị enwe ike ịtụ anya inwe mmeri.
Azịza nye nsogbu that a bụ ịchọpụta ohere ịgba chaa chaa pere mpe kachasị mma yana mmemme ị nwere uru. Mgbe ị na-agba iji uru ọ ga-enweta, ọ pụtara na ị ga-atụ anya inweta ezigbo ego.
The article 3 ụzọ ida ịgba chaa chaa mbụ pụtara na Penguuin Blog.